June 2019 – ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောဂျေအေဝင်းမြင့် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ခရစ်ယာန် ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/သတန(နိုင်)၀၀၀၁၂၅ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၆ . ၈ . ၁၉၆၉ (၄၆)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – လိပ်သိုမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဒသမတန်း ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးစောပါစကွားလယ်ပီအပွန်း ပညာရေး(ငြိမ်း) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ခင်ကြည် (ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	164 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁ အမည် ကြည်း ၂၂၇၉၈ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဝင်း ၂ အခြားအမည် လူလေး ၃ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် ၈/ရနခ(နိုင်)၀၁၉၅၁၇ ၅ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၉ . ၁၂ . ၁၉၆၂ (၅၆)နှစ် ၆ မွေးဖွားရာဇာတိ ရေနံချောင်းမြို့၊ မ​ကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၇ ပညာအရည်အချင်း အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မြို့ပြ) ၈ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ စအရ (၉၁၅) ၉ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးကုလား (ကွယ်လွန်) ၁၀ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်အေးမြင့် (ကွယ်လွန်) ၁၁ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်အေးအေးခိုင်၊ မှီခို ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	128 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁ အမည် ကြည်း-၃၄၇၀၂ ဗိုလ်မှူး ဝင်းမင်းလွင် ၂ အခြားအမည် မရှိပါ ၃ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် ၁၃/တကန(နိုင်)၁၃၁၈၃၃ ၅ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၆ . ၆ . ၁၉၇၉ (၃၉)နှစ် ၆ မွေးဖွားရာဇာတိ ရွှေညောင်မြို့ ၇ ပညာအရည်အချင်း မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မြို့ပြ) ၈ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ အမှတ် (၉၄၃)ဆောက်လုပ်ရေးတပ်ခွဲ(အင်/ယာ) ၉ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးသောင်းလွင်၊ (ကပရ) (ငြိမ်း) ၁၀ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ရွှေသန်း၊ မှီခို ၁၁ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် မရှိပါ ၁၂ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	127 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁ အမည် ကြည်း ၃၅၉၈၅ ဗိုလ်မှူး ဇော်လတ်ဝင်း ၂ အခြားအမည် မရှိပါ ၃ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် ၁၄/ပသန(နိုင်) ၁၈၁၀၃၃ ၅ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၃၀ . ၃ . ၁၉၈၂ (၃၇)နှစ် ၆ မွေးဖွားရာဇာတိ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၇ ပညာအရည်အချင်း ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(စစ်တက္ကသိုလ်) ၈ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ အမှတ်(၇)ဆက်သွယ်ရေးတပ်ရင်း ၉ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးကြည်ဝင်း၊ စခမ (၃) မြန်မာ့မီးရထား ၁၀ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်သိန်းသိန်း၊ မှီခို ၁၁ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ဝါဝါလွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	122 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁ အမည် ကြည်း ၅၃၇၈၉ ဗိုလ်ကြီး နေဇော်စိုး ၂ အခြားအမည် နေခြည်စိုး ၃ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် ၅/ဖပန(နိုင်)၀၄၈၇၄၇ ၅ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၉-၅-၁၉၈၇ (၃၃)နှစ် ၆ မွေးဖွားရာဇာတိ ဖောင်းပြင်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၇ ပညာအရည်အချင်း အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(သတ္တုဗေဒ) ၈ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊လလစ(၁၅၁)၊ ဘားအံမြို့ ၉ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးစောသိန်းဝင်း၊ (ကွယ်လွန်) ၁၀ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခင်မြင့်မြင့်ဦး၊အထက်တန်းပြ ၁၁ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်တင်နီလာကျော်၊ လက်ထောက်ကထိက၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ) ၁၂ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် မောင်ရှိန်းမြတ်ဘုန်း၊မှီခို ၁၃ လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	108 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁ အမည် ကြည်း ၆၀၄၇၁ ဗိုလ်ကြီး ဟိန်းထက်နိုင် ၂ အခြားအမည် သူရဇော် ၃ လူမျိုး/ဘာသာ ၁၄/ပသန(နိုင်)၁၈၂၀၅၃ ၄ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် ၁၄/ပသန(နိုင်)၁၈၂၀၅၃ ၅ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၅-၃-၁၉၈၈ (၃၁)နှစ် ၆ မွေးဖွားရာဇာတိ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၇ ပညာအရည်အချင်း ဆေးပညာဘွဲ့၊ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (အရိုးရောဂါပညာ) ၈ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊တဆရ (၂) (၁၀၀)၊ ဘားအံမြို့ ၉ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးသိန်းစိုး၊ ကုန်သည် ၁၀ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် (ကွယ်လွန်) ၁၁ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်နှင်းပွင့်အောင် (မှီခို) ၁၂ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် မောင်သော်စစ်နိုင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	118 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁ အမည် ကြည်း ၂၂၆၁၇ ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမင်းနောင် ၂ အခြားအမည် မိုးပျံ ၃ လူမျိုး/ဘာသာ ကရင် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/စခန (နိုင်) ၀၀၀၀၀၂ ၅ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၂ . ၂ . ၁၉၇၀ (၄၈)နှစ် ၆ မွေးဖွားရာဇာတိ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၇ ပညာအရည်အချင်း B.Sc (DSA), M.A (Defence Studies) ၈ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၉ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးမန်းမောင်မောင်ဉာဏ် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဝင် (ငြိမ်း) ၁၀ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ကြင်ခိုင်၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	135 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးခွန်မျိုးတင့် ၂။ အခြားအမည် – ဦးညီညီ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ပအိုဝ်း / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ဘအန(နိုင်)၀၀၉၀၆၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၉ . ၁၂ . ၁၉၆၅ (၅၀)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ဘားအံမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဒုတိယနှစ်(သမိုင်း) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – စျေးရောင်း ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးချစ်ညွန့်၊ မြို့နယ်လျှပ်စစ်မှူး(ငြိမ်း) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်သောင်းရင်၊ မှီခို ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	153 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးမင်းတင်ဝင်း ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – မွန် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ဘအန(နိုင်)၀၀၆၈၃၉ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၁၈ . ၆ . ၁၉၄၅ (၇၁)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – သက္ကောရွာ၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ဘီလူးကျွန်း၊ မွန်ပြည်နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – B.A, B.Ed ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – လ/ထ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးဘိုကျော် (ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	157 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးသန့်ဇင်အောင် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ဗမာ / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၇/သနပ(နိုင်)၀၈၅၆၃၃ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၁၀ . ၂ . ၁၉၈၄ (၃၂)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – မင်းရွာတာဝကျေးရွာ၊ သနပ်ပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – သိပ္ပံဘွဲ့(ဓါတုဗေဒ) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ရွှေရတီလင်းရတနာရွှေဆိုင် ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးမောင်ဌေး၊ စျေးရောင်း ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ဝင်း၊ စျေးရောင်း ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	339 Views